Ethiopia: Madaxweynahii ismaamulka Somalida oo xilkii laga qaaday iyo ciidamo aad u hubaysan oo gudaha u galay magaalada Jigjiga | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ethiopia: Madaxweynahii ismaamulka Somalida oo xilkii laga qaaday iyo ciidamo aad u hubaysan oo gudaha u galay magaalada Jigjiga
Wararka ka imanaya xarunta maamulka dowlad deeganka Somaliland Itoobiya ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday madaxweynahii hore Cabdi Iley. Wararku waxay intaas ku darayaan in madaxweyne ku meel gaadh ah loo doortay Axmed Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa golahii wasiiradii dowladii cabdi Iley.
Dhianca kale ciidamo aad u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa gudaha u galay magaalada Jigjiga ee xarrunta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya.
Sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadasho ee Fana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi, ayaa ku warantay in gelidda ciidamada ee magaalada ay ku timid codsi uga yimid maamulka Soomaalida ee Itoobiya. Waxay Fana sheegtay in ay ciidamadu si dhaqso leh u billaabi doonaan howl gallo.
Rabashadahii ka dhacay Jigjiga maalintiis abtidii ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dad gaadhaya 29 qof, halka magaalada Diridhabe oo axadii rabshado ka dhaceen iyadana ay ku dhinteen 16 qof oo somali ah.